Reedfish (Ornamental माछा, सांप) प्रजनकों ठूलो चासो हो। उनि एक असामान्य detachment mnogoperoobraznyh गर्न, माछा परिवारको प्रसिद्ध समकालीन माछा र जीवाश्म प्रतिनिधिहरु बीच छुट्टै स्थान ओगटेको हौं। वैज्ञानिकहरूले एक जीवाश्म पुर्खाहरूको reedfish Calabar फेला पार्न सकेको छैन।
एक लम्बी शरीर र सर्प गरेको छाला जस्तै परिमार्जन हीरा आकारको तराजू: यो माछा को शरीर एक वास्तविक सर्प को नेत्रहीन reminiscent छ। यो माछा-सर्प मा एक विशाल मुख र तेज दाँत एउटा सिधा त्रिकोणात्मक टाउको छ। यो सबै छवि reedfish originality थप्छ। को पुच्छर क्षेत्र पृष्ठीय spikes प्रबन्ध छन्। तिनीहरूको संख्या518 टुक्रा बाट दायरामा फरक हुन्छ।
कि त पूर्ण अनुपस्थित वा मुर्कुट्टा को पछिल्लो तिर विस्थापित छन् Ventrals। यो संरचना मात्र "zmeinost" यो असामान्य जलीय जनावरहरूको उपस्थिति reinforces।
जलजीवालय माछा, को सर्प चालीस सेन्टिमिटर गर्न बढ्छ। त्यो 8 10 वर्ष बाँच्न सक्छ। कालो आँखा र छोटो एन्टेनाइग्यालेक्सिज-spiracles मछलीघर एक सर्प हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिन। यस्तो असामान्य उपस्थिति लागि, यी माछा reservoirs को मनपर्ने घर बासिन्दाहरू छन्।
Calabar reedfish: सामग्री
reedfish तल को एक ठूलो क्षेत्र आवश्यक रूपमा ठूलो लजीवालय, माछा को सफल मर्मतका लागि खरिद हुनुपर्छ। पानी न्यूनतम आवश्यक एक माछा 100 लिटर छ। माछा समूह (केही व्यक्तिहरूलाई लागि हेर्न धेरै रोचक) 200 भन्दा बढी लिटर गर्न मात्रा जो जलजीवालय, राम्रो महसुस हुनेछ।
यो माछा गठन कुनै पनि खाली मा सक्षम सर्प seep छ देखि ट्यांक, कस बन्द राख्नुपर्छ। यो ट्यांक आवरण र कृत्रिम snags को एक किसिम राख्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो माछा नयाँ ठाउँमा अधिक चाँडै छाँटकाँट गर्न र नयाँ वातावरणमा प्रयोग प्राप्त गर्छ। विशेष गरी, भारतीय बादाम पात जस्तै reedfish shelters को भूमिका प्रदर्शन र एक जलजीवालय मा हावा-कंडीशनिंग पानी प्रदान गर्नुहोस्।
सामान्य यी जलीय जनावर थप सक्रिय यसलाई साँझ वा विस्तृत प्रकाश मा छ बनिरहेका छन्। माछा खाना को खोज मा ट्यांक सबै कुनामा अन्वेषण गर्न थाल्छ। यो coiling असामान्य घन्टी मा पानी सतहमा rises पछि। यो sumptuous भोजन पचाउन मद्दत गर्छ जो कहिले काँही हावा, मा सास फेर्न गर्न आवश्यक छ।
पानी तापमान 24 डिग्री तल गिर हुँदैन। Reedfish Calabar र रासायनिक संकेतक संवेदनशील। तसर्थ, उपयोगी पीएच स्तर - 7.5 गर्न 6.2 र GH देखि, क्रमशः, 182देखि यो त्यहाँ यी सूचकहरू मा तेज उतार चढाव थिए महत्त्वपूर्ण छ।
acclimatization प्रक्रिया, साथै पानी बाध्य तीव्र परिवर्तन मा हावा-कंडीशनर प्रयोग गर्न आवश्यक छ, "Biotopol", "Akklimol" वा "Stresskoat"। formalin र जैविक रंजक, साथै पानी लवणता एक तेज परिवर्तन छोड्न Reedfish।
को को सबैभन्दा कि माछा मछलीघर पाल्तु जनावर पसलहरूमा मा प्रस्तुत छ, प्राकृतिक मूल को हो। त्यसैले, आकर्षक जलीय मालिक को अधिग्रहण पछि यो पूर्व overexposure (कहिले काँही 1 महिना सम्म) कैद शर्तहरूमा थप मिलाइएको संग आवश्यक छ। तर विक्रेता अक्सर यी अवस्था पालना छैन, र धेरै चरा घर लजीवालय मा लन्च पछि लगभग तुरुन्त मृत्यु छन्।
त्यो किन जलजीवालय छ र त्यहाँ धेरै गरिबी घर लजीवालय मा acclimatized reedfish एक धारणा छ। खुसीको कुरा, यो छैन। स्वस्थ माछा तपाईंले थुनामा यसको नियम पालन भने, Ornamental लजीवालय लागि नयाँ जीवित अवस्था अनुकूल।
एक स्वस्थ व्यक्तिगत भेद गर्ने बारे एक सानो बिट। यो माछा खरिद गरेर, उनको छाला ध्यान। त्यहाँ पनि अलि कति विपरीत स्थलहरू, सम्भवत हो भने, माछा बिरामी छ, त्यो लामो बाँच्न छैन।
Reedfish रुचाउने कुनै पनि कठिनाइ उत्पन्न गर्दैन। खुशी साथ स्वस्थ माछा विभिन्न प्राकृतिक फिड (पनि स्थिर) लिन्छ। त्यो विशेष गरी ठूलो किरा रुचि। न्यानो महिनामा आहार tadpoles र कीडे गर्न प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। स्क्विड र झिंगा को सानो टुक्रा हरेस Reedfish। माछा फिड लगभग indifferent सुक्खामा, ठूलो नचाहनु तिनीहरूलाई खान्छ।
माछा-साँप - मछलीघर को शान्तिपूर्ण बासिन्दा, यो आफ्नो ठूलो छिमेकी अपमान गर्दैन। छ जो निल्छ गर्न सम्भव प्रतिहरू हुन ठूलो Reedfish। उनीहरूले कुनै पनि माछा संग राम्रो तरिकाले प्राप्त, तर trifle, विशेष Sklar र नियन मा, भोजन लागि लाग्न सक्छ।
माछा आफ्नो जीवनको तेस्रो वर्षमा यौन परिपक्वता पुग्न। मुख्य फरक पुरुष गुदा फिन देखि महिला छ। महिलाहरुको लागि यो9रेज छ, र पुरुष 12-14 रेज बनेको एक फिन छ।
कैद मा Reedfish प्रजनन सम्भव उत्पादन, तर हर्मोन उत्तेजना आवश्यक हुनेछ।
जंगली मा Spawning
यो माछा Spawning inundations समयमा सुरु हुन्छ। महिलाहरुको अधिक पुरुषहरु लडाई एकदम लामो लडाई व्यवस्था। को वाष्प कटिबद्ध छ र मल हुन्छ पछि, महिला तटीय वा प्वालहरू मा बाक्लो वनस्पति मा अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। सन्तान दुई दिन पछि ज्योति मा निस्कनु थाल्छ, र चार दिन पछि भुट्नु पहिले नै राम्रो क्रल।
यो माछा भुट्नु बाह्य नाले जवान जनावर पानी मा बाँच्न अनुमति दिने, असंतृप्त अक्सिजन fringed छन्। तिनीहरूले यस्तो Artemia रूपमा planktonic जीव खान्छन्।
Sated, reedfish माछा असामान्य व्यवहार हुन सक्छ। को मछलीघर को पछि पूर्ण भोजन प्ले गर्न सक्नुहुन्छ बासिन्दाहरू, र मात्र होइन आफूलाई बीच तर पनि आफ्नो मास्टर संग: एक बरु गैर-मानक अनुमानको लागि प्रत्येक कारण छ।
यो वर्णन माछा sighted कि विश्वास छ। तर यो मामला छैन। बस, तिनीहरूले चाँडै निवास नयाँ ठाउँ टोलीमा बीच, सक्रिय र सार्दा छिमेकी मिलेर महारत। यस मामला मा, माछा स्पर्श, गन्ध र दृष्टि को आफ्नो अर्थमा प्रयोग गर्दछ। खैर, कोठा मा मानिसहरू पनि, साँझ reedfish मछलीघर को मालिक को लागि प्रतीक्षा गर्न सक्छ त हेर्नुहोस्।
तातो बिरालो नाक मा चिन्तित हुनुपर्छ र के अर्को गर्न
प्रकार, निर्माता र समीक्षा एक समीक्षा: बिरालोहरु, बिरालोको बच्चाहरुको र बिरालोहरु लागि चिकित्सा forage
कसरी पाठकहरूलाई सही ब्लगमा
खाना पसलहरूमा लागि प्रशीतन उपकरण
सपना समाधान: किन फोटो लिन
मोडेल 2014 को अवलोकन - "लीफान Sebrium"। रूसी सडक मा "चिनियाँ"
टाइटेनियम उपत्यका। विशेष आर्थिक क्षेत्र
Smecta अनुरूप छ। बच्चाहरु को लागि एनालग "स्मकिटी"। "स्किटक" वा "पोलिस्नोब" - कुन राम्रो छ?
रक्तपातपूर्ण मरियम ककटेल - सफल मान्छे।
सीधा के हो र यो के हो?
Kudesnitsa - यो ... एटिमोलजी, शब्द